Xeer Ilaaliyaha Qaranka oo shaaciyay kiisas musuq maasuq ku fiday Wasaarado | Sagal Radio Services
Sagal Radio Services • News Report • May 18, 2020
Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka dowladda Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in xafiiskiisa uu gacanta ku haayo kiis musuq maasuq ah oo ka bilowday Wasaaradda Caafimaadka, kuna fiday Wasaarado kale oo ka tirsan Xukuumadda Soomaaliya.
Xeer Ilaaliyaha oo wareysi siiyay laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaa sheegay in Xafiiskiisa oo kaashanaya Hanti dhowrka Qaranka la haayo caddeymo ku saabsan musuq maasuq loo xiray Mas’uuliyiin.
Waxaa uu sheegay in Xafiiskiisa uu musuq maasuqa ka taagan yahay meel aad u adag, isla markaana la dagaalanka musuq maasuqa iyo la dagaalanka Argagixisada ay isku meel xafiiskiisa uga taagan yihiin.
Mar wax laga weydiiyay kiiska ay u xiran yihiin Mas’uuliyiinta Wasaaradda Caafimaad inuu siyaasad ku lug leeyahay, ayuu tilmaamay in aanu wax xiriir ah la laheyn arrimo siyaasadeed, isagoo intaa ku daray inuu yahay xogta ugu badan ee kiiskaas.
Waxaa uu kaloo sheegay inay jiraan dad difaacaya dadka musuqa lagu hayo kuwaasoo ka dhigaya arrinta in dad gaar ah loo socdo ama dano gaar ah laga leeyahay.
Kiisaska musuq maaqusa ee lugaha la galay Wasaarado ka tirsan Xukuumadda ayaa ka soo bilowday Wasaaradda Caafimaadka, waxaana la xiray Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Agaasime waaxeedyo, sidoo kale dadka xiran waxaa ku jira Agaasime ka tirsan Wasaaradda Kalluumeysiga iyo shirkado kala shaqeeya Hey’adaha dowladda, kana qeyb qaata fududeynt kharashaadka hey’adaha dowladda.
Tags dowladda Soomaaliya